Ra'isal wasaaraha Canada oo ilmo yar oo loogu magac daray qaabilay - Worldnews.com
Wiilkan yaree laba bilood jirka ah oo magaciisoo buuxaa yahay Justin Trudeau Adam
Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in muhaajiriinta dalka Canada si sharci darro ah ku soo gala aysan heli doonin fursadaha ay helaan kuwa sida...
Dowladda Canada oo ciidammo u direysa dalka Mali
Dowladda Canada ayaa sheegtay in ay ciidamo iyo diyaarado ah nooca gaadiidka loo adeegsado ay u dirayso dalka Mali si ay qayb uga noqdan ciidamada nabad ilaalinta ee...
Ilmo bil dhallan oo ay 7 ilko usoo baxeen dalka Hindiya
Dhaqaatiir ku sugan gobolka Gujurat ee dalka Hindiya ayaa 7 ilkood ka bixiyay ilmo yar oo bil uun dhallan. Sida ay kusoo waramayso wariyaheena Hindiya Sushila Singh,...
Sawirro: Wiilka yar ee Ra'isulwasaaraha Canada iyo booqashadii Hindiya
Ra'isulwasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa todobaadkan ciwaano waaweyn u samaynayay warbaahinta adduunka kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Canada, balse waxaa...
​Booliiska Canada oo qabtay rag weeraray masaajid
Booliska Canada ayaa sheegay inay gacan ku dhigeen labo qof oo lala xiriirinayo weerar ka dhacay Masjid ku yaallo magaalada Quebec, kaasi oo ay ku dhinteen Lix ruux....
Gareowe Online 2017-01-30
Booliska Canada ayaa sheegay inay gacan ku dhigeen labo qof oo lala xiriirinayo weerar ka dhacay Masjid ku yaallo magaalada Quebec, kaasi oo ay ku dhinteen Lix ruux. Saraakiisha Booliska magaalada Quebec ayaa sheegay inuusan jirin qof saddexaad oo ka qeyb-qaatay weerarka xarunta dhaqanka Islaamka ee Masjidkaas. Weerarka ayaa dhacay xilli dadka...
Ra\_'iisulwasaaraha Canada: "Waan bahdilnay dadka asalka u daganaa dalka"
Ra'iisulwasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa khudbaddii uu ka jeediyay gollaha loo dhan yahay ee Qarammada Midoobay u adeegsaday in uu kaga hadlo horusocd la'aanta dawladda Canada ee arrimaha dadka asalka u daganaa dalkaas. Wuxuu sheegay in dhaxalkii uu ka tagay gumaysigii iyo saamaynta uu kaga tagay dadkii asalka u daganaa dalka in ay ka tahay "bahdil, dayacaad iyo tacaddi"....
Amiir Harry iyo Sawir qaadaha ra\_'iisul wasaaraha Canada oo isu eg
Amiir Harry ayaa Canada ka helay nin ay aad isugu eg yihiin oo ah sawir qaadaha Ra'iisul wasaare Justin Trudeau. Adam Scotti ayaa ku sugnaa meel ay ka socdeen ciyaaraha fudud oo Trudeau uu u tagay in uu soo daawado xarigana ka jaro. Laakiin Ra'iisul wasaaraha ayaa kaamiro soo qaatay si uu u sawiro labada qof ee isu eg. Mr Scotti ayaa markaa ka dib sawirka ku baahiyay Twitter-ka...
MINEAPOLIS: Waddo Loogu Magac Daray Nin Soomaaliyeed
Magaalada Minneapolis waxaa shalay la dhagax dhigay waddo loogu magac daray Allaha u naxariistee Xuseen Samatar oo ahaa mas’uulkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee dalkan Mareykanka xil looga doorto. ......
Tuulo yar oo ku taal miyiga koonfureed ee gobolka Manitoba, ee dalka Canada, ayaa sheegtay in ay rajaynaso in uu soo gaadho gargaar lagu taakulaynayo dadka ku soo qulqulaya ee qaxootiga ah. Dowladda hoose ee Emerson-Franklin ayaa isu diyaarinaysa in ay qaabisho dad badan oo kale oo si sharci darro ah uga soo tallaabaya soohdinta Canada iyo Maraykanka. Dabayaaqada todobaadkii...